ဌာနေဘာသာစကားပြောဆိုသူများ၏အရေအတွက်၊ အိန္ဒိယပြည် - ဝီကီပီးဒီးယား
ပြည်နယ်နှင့်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေများအများဆုံးပြောဆိုကြသော (အန်လ် ၁) ပထမဘာသာစကားဖြစ်သည်။  [lower-alpha ၁]
အိန္ဒိယပြည်သည် ဘာသာစကား ပေါင်းရာနှင့်ချီ၍ တည်ရှိသည့်မြေဖြစ်ပါသည်။ အိန္ဒိယလူမျိုးအများစုသည် အင်ဒို - ဥရောပ အင်ဒို - အာရိယန်မျိုးနွယ်၏အနွယ်ဝင်လူမျိုးစုများဖြစ်ပြီး (၇၇%)၊ ဒြဝီဒီယန် (၂၀.၆၁%), ဩစတြိုအေးရှတစ် ( မုန္ဒ ) (၁.၂%), သို့မဟုတ် စိနို တို့၏ဘာသာစကားများကိုပြောဆိုကြသည်။ ဟိမဝန္တာတောင် ၏အချို့ဘာသာစကားများကိုမူ လျှို့ဝှက်အဆင့် သတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်သော တိဘက် (၀.၈%) ။ အက်စ်အိုင်အန်လ် အသနိုလော့ဂ် သည်အိန္ဒိယအတွက်သက်ရှိဘာသာစကား ၄၁၅ ခုကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
၂.၁ ပြောဆိုသူအရေအတွက်တစ်သန်းကျော်ရှိသည့် ဘာသာစကား
၂.၂ ပြောဆိုသုအရေအတွက် တစ်သိန်းမှတစ်သန်း
အိန္ဒိယ အလယ်ပိုင်းအစိုးရ တွင်အခြေခံဥပဒေအရအသိအမှတ်ပြုထားသော တရားဝင်ဘာသာစကား ၂၃ ခုရှိသည်။ ဗဟိုအစိုးရမှ ဟိန္ဒီ နှင့် အင်္ဂလိပ် ကိုတရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရ များသည်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာတရားဝင်ဘာသာစကားများကိုအသုံးပြုကြသည်။
ဟိန္ဒူ သည်အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းတွင်အများဆုံးပြောဆိုသောဘာသာစကားဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယသန်းခေါင်စာရင်းက "ဟိန္ဒူ" ၏အဓိပ္ပာယ်ကျယ်ပြန့်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်မှာ " ဟိန္ဒူခါးပတ် " ဖြစ်သည်။  ၂၀၀၁ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းအရ အိန္ဒိယလူ ဦး ရေ၏ (၅၃.၆) ရာခိုင်နှုန်းသည်ဟိန္ဒူဘာသာကို ၎င်းတို့၏ ၄၁% သည် ၄ င်းတို့၏မိခင်ဘာသာစကားသို့မဟုတ်မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်ပြောဆိုကြပြီး၊    ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းသောအင်ဒီးယန်းများက၎င်းတို့သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကိုဒုတိယဘာသာစကားအဖြစ်ပြောဆိုနိုင်သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
ဘာသာစကား ၁၃ မျိုးသည်အိန္ဒိယလူ ဦး ရေ၏ ၁% ကျော်နှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အကြား ၉၅% ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားသောဘာသာစကားများဖြစ်သည် ။ အင်ဒီးယန်းလူ ဦး ရေ ၁ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာပြောသောဘာသာစကားများမှာ သန္တလီ (၀.၆၃%)၊ ကက်ရ်ှမီးရီ (၀.၅၄%)၊ နီပေါ (၀.၂၈%), စင်ဒီ (၀.၂၅%), ကောန္ကာဏီ (၀.၂၄%), ဒေါဂြီ (၀.၂၂%), မေအီတေအီ (၀.၁၄%) တို့ဖြစ်သည်။ဘို ဒို (၀.၁၃%) နှင့် သင်္သကရိုက် ၊ သက္ကတ (၂၀၀၁ ခုနှစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသန်းခေါင်စာရင်း၌ လူပေါင်း ၁၄၁၅၅ ဦး သာ သက္ကတသည်သူတို့၏ မိခင်ဘာသာစကား အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်) ။  "စီစဉ်ထားခြင်း" မဟုတ်သောအကြီးဆုံးဘာသာစကားမှာ ဘီလ္လီ (၀.၉၅%) ဖြစ်ပြီးနောက်တွင် ဂေါဒီ (၀.၂၇%)၊ က‌ေန္ဒသီ (၀.၂၁%), တူလူ (၀.၁၇%) နှင့် ကုရုခ် (0.10%) တို့ဖြစ်သည်။
၁၉၉၁ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယလူဦးရေ၏ ၁၉.၄% ဘာသာစကားနှစ်မျိုးတတ်ကျွမ်း ပြောဆိုပြီး ၇.၂% သုံးဘာသာစကားသုံးမျိုးတတ်ကျွမ်း ပြောဆိုကြသည်။။
အိန္ဒိယတွင် Greenberg ၏မတူကွဲပြားမှုအညွှန်းကိန်း ၀.၉၁၄ ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာနိုင်ငံမှကျပန်းရွေးချယ်ထားသောလူနှစ်ယောက်တွင် ၉၁.၄% တွင်ကွဲပြားသောမိခင်ဘာသာစကားများရှိသည်။ 
ယင်းနှုန်းအဖြစ် အိန္ဒိယ 2011 ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်း, စပီ၏အမြင့်ဆုံးအရေအတွက်အားဖြင့်ဘာသာစကားများအဖြစ်အောက်ပါအတိုင်းနေကြသည်: ဟိန်ဒီ, ဘင်္ဂါလီ, မာရသီ, ဂု, တမီး, ဂူ, ဒူ, ကန်နာဒါ, အိုဒိယ, မာလာယလမ် ။  
၂၀၀၁ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းအရဘာသာစကား ၂၉ ခုသည်မိခင်ဘာသာစကားပြောဆိုသူ ၁ သန်းကျော် (စုစုပေါင်းလူ ဦး ရေ၏ ၀.၁%) ရှိသည်ဟုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ စာလုံးမည်း ဖြင့်ရေးထားသောဘာသာစကားများသည်စီစဉ်ထားသောဘာသာစကားများဖြစ်သည်။ (မိခင်ဘာသာစကားပြောဆိုသူ ၁ သန်းအောက်သာရှိသောဘာသာစကားသည် သက္ကတ ဖြစ်သည်) ပထမဇယားကိုသတ်မှတ်ထားသည့်ဘာသာစကားများအတွက်သာပြောဆိုခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည်။
အိန္ဒိယတွင်ပထမ ဦး ဆုံး၊ ဒုတိယနှင့်တတိယဘာသာစကားများကိုပြောဆိုသူများ (2011 Census)
</br> လူ ဦး ရေ
ဟိန်ဒီ [lower-alpha ၂] 528,347,193 ၄၃.၆၃% 139,207,180 24,160,696 691,347,193 ၅၇.၀၉%
အင်္ဂလိပ် 259,678 ၀.၂၂% 83,125,221 45,993,066 129,259,678 ၁၀.၆၇%
ဘင်္ဂလီ 97,237,669 ၈.၀၃% 9,037,222 1,008,088 107,237,669 8.85%
မာရသီ 83,026,680 ၆.၈၆% 12,923,626 2,966,019 99,026,680 ၈.၁၈%
တီလီဂု 81,127,740 6.70% 11,946,414 1,001,498 94,127,740 ၇.၇၇%
တမီးလ် 69,026,881 ၅.၇၀% 6,992,253 956,335 77,026,881 ၆.၃၆%
ဂူဂျာရသီ 55.492.554 4.58% 4,035,489 1,007,912 60.492.554 4.99%
အူဒူ 50,772,631 ၄.၁၉% 11,055,287 1,096,428 62,772,631 ၅.၁၈%
ကန်နာဒါ 43,706,512 ၃.၆၁% 14,076,355 993,989 58,706,512 4.84%
Odia 37,521,324 ၃.၁၀% 4.972,151 31,525 42,551,324 ၃.၅၁%
မလေးရာလမ် 34,838,819 2.88% 499,188 195,885 35,538,819 ၂.၉၃%
ပနျခြာပီ 33,124,726 2.74% 2,300,000 720,000 36,074,726 2.97%
Sanskrit 24,821 0,002% 1,234,931 1,196,223 2,360,821 0.19%
1 Hindi 329,518,087 39.29% 422,048,642 41.1% 528,347,193 43.63% 366 million
* ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်ဆီနီပူတီခရိုင်၏မဏိပူရ၊ မာအိုမာရမ်နှင့်ပါရူပုဒ်မခွဲများ၏ကိန်းဂဏန်းများကိုဖယ်ထုတ်ထားသည်။ </br> ** မဏိပူရပြည်နယ်နီနာပါတီခရိုင်ရှိ Mao-Maram, Paomata နှင့် Purul ဌာနခွဲများမှအပ ၂၀၀၁ ခုနှစ်အတွက်ဘာသာစကားတစ်မျိုးစီ၏ပြောဆိုသူရာခိုင်နှုန်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏လူ ဦး ရေကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၃၂ Kui 916,222 ၀.၀၈၉%
၃၃ လူရှိုင်း / မီဇို 674,756 ၀.၀၆၆%
၃၄ Halabi 593.443 ၀.၀၅၈%
၃၅ Korku 574,481 ၀.၀၅၆%
၃၆ Miri / Mishing 551,224 0.054%
၃၇ Munda 469.357 ၀.၀၄၆%
38 Karbi / Mikir 419,534 0.041%
၃၉ ကရား 362,070 ၀.၀၃၅%
၄၀ Ao 261,387 ၀.၀၂၅%
41 Savara 252,519 ၀.၀၂၅%
42 Konyak 248,109 ၀.၀၂၄%
43 Kharia 239,608 ၀.၀၃၃%
44 အင်္ဂလိပ် 226.449 ၀.၀၂၂%
45 Malto 224,926 ၀.၀၂၂%
46 Nissi / Dafla 211.485 ၀.၀၂၁%
47 Adi 198,462 ၀.၀၁၉%
၄၈ Thado 190,595 ၀.၀၁၉%
49 လောတ 170,001 ၀.၀၁၇%
၅၀ Coorgi / Kodagu 166,187 ၀.၀၁၆%
၅၁ ရာဘ 164,770 ၀.၀၁၆%
52 Tangkhul 142,035 ၀.၀၁၄%
၅၃ Kisan 141,088 ၀.၀၁၄%
54 Angami 132,225 ၀.၀၁၃%
55 Phom 122,508 ၀.၀၁၂%
56 Kolami 121,855 ၀.၀၁၂%
57 ခွန်ဒွန် / ကွန်ဒို  118,597 ၀.၀၁၂%
58 Dimasa 111,961 ၀.၀၁၁%
59 Ladakhi 104,618 0.010
၆၀ Sema 103,529 0.010
၂၀၀၁ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်း၏ ဘာသာစကား တစ်မျိုးစီသည် မိခင်ဘာသာစကား တစ်မျိုးသို့မဟုတ်တစ်မျိုးထက် ပို၍ ပါဝင်သည်။ စပီကာနံပါတ်များကိုဤမိခင်ဘာသာစကားများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်၊ ၎င်းတို့သည်သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားအတွက်စပီကာနံပါတ်များလည်းပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်တီဂူ ဘာသာစကား (စုစုပေါင်းစပီကာ ၈၁,၁၂၇,၇၄၀ ရှိသည့်) တီဂူ ဘာသာစကား (စပီကာ ၈၀,၉၁၂,၄၅၉)၊ ဗတ်ဒါရီ (စပီကာ ၁၉၈,၀၂၀) နှင့်အခြားသူများ (၁၇,၂၆၁ စပီ) တို့ပါ ၀ င်သည်။  ၂၀၀၁ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုမှအထွေထွေမှတ်စုများက "မိခင်ဘာသာစကား" ကိုကလေးဘဝတွင်လူတစ် ဦး အားမိခင်အားပြောသောဘာသာစကားအဖြစ် "မိခင်ဘာသာစကား" ဟုသတ်မှတ်သည်။ မိခင်နို့စို့အရွယ်ကတည်းကသေဆုံးသွားလျှင်ကလေး၏အိမ်၌အဓိကအားဖြင့်ပြောဆိုသောဘာသာစကားသည်မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ " 
အောက်ပါဇယားစာရင်းကို 2011 ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းအရသိရသည်တစ်ဦးထက်ပိုသန်းပီရှိသည်သောသူတို့အားမိခင်လျှာ: 
1 Hindi ၃၂၂၂၀၀၀၀၀ ၂၆.၆%
2 Bengali ၉၆၁၈၀၀၀၀ ၇.၉၄%
3 Marathi ၈၂၈၀၀၀၀၀ ၆.၈၄%
4 Telugu ၈၀၉၁၀၀၀၀ ၆.၆၈%
5 Tamil ၆၈၈၉၀၀၀၀ ၅.၆၉%
6 Gujarati ၅၅၀၄၀၀၀၀ ၄.၅၅%
7 Urdu ၅၀၇၃၀၀၀၀ ၄.၁၉%
8 Bhojpuri ၅၀၅၈၀၀၀၀ ၄.၁၈% Hindi
9 Kannada ၄၃၅၁၀၀၀၀ ၃.၅၉%
10 Malayalam ၃၄၇၈၀၀၀၀ ၂.၈၇%
11 Odia ၃၄၀၆၀၀၀၀ ၂.၈၁%
12 Punjabi ၃၁၁၄၀၀၀၀ ၂.၅၇%
13 Rajasthani ၂၅၈၁၀၀၀၀ ၂.၁၃% Hindi
14 Chhattisgarhi ၁၆၂၅၀၀၀၀ ၁.၃၄% Hindi
15 Assamese ၁၄၈၂၀၀၀၀ ၁.၂၂%
16 Maithili ၁၃၃၅၀၀၀၀ ၁.၁0%
17 Magadhi/Magahi ၁၂၇၁၀၀၀၀ ၁.၀၅% Hindi
18 Haryanvi ၉၈၀၇၀၀၀ 0.810% Hindi
19 Khortha/Khotta ၈၀၃၉၀၀၀ 0.664% Hindi
20 Marwari ၇၈၃၂၀၀၀ 0.647% Hindi
21 Santali ၆၉၇၃၀၀၀ 0.576%
22 Kashmiri ၆၅၅၄၀၀၀ 0.541%
23 Bundeli/Bundel khandi ၅၆၂၆၀၀၀ 0.465% Hindi
24 Malvi ၅၂၁၃၀၀၀ 0.430% Hindi
25 Sadan/Sadri ၄၃၄၆၀၀၀ 0.359% Hindi
26 Mewari ၄၂၁၂၀၀၀ 0.348% Hindi
27 Awadhi ၃၈၅၁၀၀၀ 0.318% Hindi
28 Wagdi ၃၃၉၄၀၀၀ 0.280% Bhili/Bhilodi
29 Lamani/Lambadi ၃၂၇၇၀၀၀ 0.271% Hindi
30 Pahari[မှတ်စု ၁] ၃၂၅၄၀၀၀ 0.269% Hindi
31 Bhili/Bhilodi ၃၂၀၇၀၀၀ 0.265%
32 Hara/Harauti ၂၉၄၄၀၀၀ 0.243% Hindi
33 Nepali ၂၉၂၆၀၀၀ 0.242%
34 Gondi ၂၈၅၇၀၀၀ 0.236%
35 Bagheli/Baghel Khandi ၂၆၇၉၀၀၀ 0.221% Hindi
36 Sambalpuri ၂၆၃၀၀၀၀ 0.217% Odia
37 Dogri ၂၅၉၇၀၀၀ 0.214%
38 Garhwali ၂၄၈၂၀၀၀ 0.205% Hindi
39 Nimadi ၂၃၀၉၀၀၀ 0.191% Hindi
40 Surjapuri ၂၂၅၆၀၀၀ 0.186% Hindi
41 Konkani ၂၁၄၇၀၀၀ 0.177%
42 Kumauni ၂၀၈၁၀၀၀ 0.172% Hindi
43 Kurukh/Oraon ၁၉၇၇၀၀၀ 0.163%
44 Tulu ၁၈၄၂၀၀၀ 0.152%
45 Manipuri ၁၇၆၁၀၀၀ 0.145%
46 Surgujia ၁၇၃၈၀၀၀ 0.144% Hindi
47 Sindhi ၁၆၇၉၀၀၀ 0.139%
48 Bagri ၁၆၅၇၀၀၀ 0.137% Punjabi
49 Ahirani ၁၆၃၆၀၀၀ 0.135% Khandeshi
50 Banjari ၁၅၈၁၀၀၀ 0.131% Hindi
51 Brajbhasha ၁၅၅၆၀၀၀ 0.129% Hindi
52 Dhundhari ၁၄၇၆၀၀၀ 0.122% Hindi
53 Bodo/Boro ၁၄၅၅၀၀၀ 0.120% Bodo
54 Ho ၁၄၁၁၀၀၀ 0.117%
55 Gojri/Gujjari/Gujar ၁၂၂၈၀၀၀ 0.101% Hindi
56 Mundari ၁၁၂၈၀၀၀ 0.093%
57 Garo ၁၁၂၅၀၀၀ 0.093%
58 Kangri ၁၁၁၇၀၀၀ 0.092% Hindi
59 Khasi ၁၀၃၈၀၀၀ 0.086%
60 Kachchhi ၁၀၃၁၀၀၀ 0.085% Sindhi
↑ 50th Report of the Commissioner for Linguistic Minorities in India (July 2012 to June 2013) (PDF)။ Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India။ 26 December 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 September 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ HowaBihari lost his mother tongue to Hindi။
↑ These four charts break down India's complex relationship with Hindi။
↑ Nearly 60% of Indians speakalanguage other than Hindi။
↑ COMPARATIVE SPEAKERS' STRENGTH OF SCHEDULED LANGUAGES -1971, 1981, 1991 AND 2001။ censusindia.gov။ Office of the Registrar General & Census Commissioner, India။ 2007-11-30 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2015-10-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ethnologue: Languages of the World. SIL International။
↑ "Hindi mother tongue of 44% in India, Bangla second most-spoken"။
↑ Statement4: Scheduled Languages in descending order of speakers' strength – 2011
↑ Government of India၊ Ministry of Home Affairs။ C-17 POPULATION BY BILINGUALISM AND TRILINGUALISM။
↑ Indiaspeak: English is our 2nd language – Times of India။
↑ Language (PDF)။ Registrar General and Census Commissioner of India (2011)။ 13 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Languages Spoken by More Than 10 Million People – Table – MSN Encarta။
↑ The data are from http://www.censusindia.gov.in/2011census/C-16/DDW-C16-STMT-MDDS-0000.XLSX.
↑ 2011 Census tables: C-16, population by mother tongue။
↑ Masica, Colin P. (1991). The Indo-Aryan languages, Cambridge language surveys. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-23420-7။
ကိုးကား အမှား - <ref> tags exist foragroup named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဌာနေဘာသာစကားပြောဆိုသူများ၏အရေအတွက်၊_အိန္ဒိယပြည်&oldid=503537" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၄:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။